वास्तवमा मैले त्यो फोटो प्रकाशित आवेगमा आएर गरेकी थिए : शुभेच्छा थापा – Namaste Filmy
वास्तवमा मैले त्यो फोटो प्रकाशित आवेगमा आएर गरेकी थिए : शुभेच्छा थापा
प्रर्दशन अगावै चर्चामा रहेको चलचित्र “मिस नेपाल” लाई काठमाण्डौं स्थित जोशी सेवा समाजले सम्मान गरेको छ । समाजको १४ औं वार्षिक साधारण सभाको अवसर पारेर गत शनिवार चलचित्रको सम्मानार्थ प्रमुख अतिथी मोहन जोशीले चलचित्रकी निमात्री शुभेच्छा थापा र निर्देश सुरेन्द्र तुलाधरलाई मायाको चिन्हो प्रदान गर्दै सम्मान गरेको छ । केहि दिन पहिले समाजले जय नेपाल सिनेमा हल काठमाण्डौंमा च्यारिटी सो प्रर्दशन गरेकोमा समाजका सदस्यहरुलाई नारी संघर्ष र साहसमा आधारित सकारात्मक सन्देश बोकेको चलचित्र सम्मान योग्य रहेको भन्दै समाजले चलचित्रलाई सम्मान गरेको हो । नेपालको चलचित्र इतिहासमा नै रिलिज पुर्व सम्मान प्राप्त गर्ने अहिले सम्मको पहिलो मानिएको चलचित्रकी नायिका तथा निमात्री शुभेच्छा थापाले भावुक मुद्रामा प्रतिक्रिया दिँदै भन्नु भयो “चलचित्र प्रतिको सम्मानले मेरो उत्साह र हौसल्लामा अझै बृद्धि भएको छ, यो सम्मान मेरो मात्र नभई सम्पुर्ण संघर्षशिल नेपाली नारीहरु र समाज प्रति सर्मप्रित रहँदै आइरहनु भएका सम्पुर्ण महिलाहरुको लागि पनि हो ।”
काठमाण्डौंको जयनेपाल, हेटौंडाको ओम चलचित्र मन्दिरलगायत केहि हलहरुमा च्यारिटी शो प्रर्दशन गरिसकेको चलचित्र मिस नेपालको गत मे ५ मा अस्ट्रेलियाको भियनामा समेत भब्य प्रर्दशन गरिएको छ ।
देशमा वर्षेनी सुन्दरी प्रतियोगीताको आयोजना गर्दै आइरहेको आधिकारीक संस्था “हिडन ट्रेजर”ले आफ्नो संस्थाको मानमर्धन गर्ने चलचित्र भन्दै प्रर्दशन रोक्न ठूलै प्रयास समेत गरेको थियो । निमात्री थापाको मुख्य भुमिका रहेको चलचित्रमा अन्य कलाकारहरुमा क्षितिजा शाक्य, कल्याण घिमिरे, सुरज सिंजापती, सविन श्रेष्ठ, रश्मी भट्ट लगायतका रहेका छन् । चलचित्रको जेष्ठ ९ गते अल नेपाल रिलिज गरिने भब्य तयारी भइरहेको छ । यसै सन्र्दभमा नायिका तथा निमात्री शुभेच्छा थापासँगको कुराकानीको छोटो अंश ः
प्रश्न ः चलचित्र “मिस नेपाल” को रिलिज कहिले हुने भयो ?
उत्तर ः आउँदो जेष्ठ ९ गते अल नेपाल रिलिजको तयारी भइरहेको छ ।
प्रश्न ः तपाईको चलचित्र “मिस नेपाल” लाई रिलिजिङ्ग पुर्व नै जोशी सेवा समाज, काठमाण्डौंद्धारा सम्मान गरियो ?
उत्तर ः हामीले पहिले नै केहि स्थानहरुमा ट्ङ्«याल र च्यारिटी सोहरु गरेका थियौं । काठमाण्डौंको जय नेपालहल, हेटौंडाको ओम चलचिचत्र मन्दिर, अस्ट्रेलियाको भियना लगायतका स्थानहरुमा समेत च्यारिटी सो प्रर्दशन भइसकेको छ । जय नेपालहलमा भएको च्यारिटी सोको आयोजक जोशी सेवा समाज नै रहेको थियो ।
प्रश्न ः चलचित्रमा सम्मान नै गर्नु पर्ने त्यस्तो के रहेको छ र ?
उत्तर ः चलचित्र मिस नेपाल नारी संघर्ष र साहसीक कथावस्तुमा आधारित रहेको छ । भड्किलो क्रियाकलापहरुबाट भन्दा पनि स्वच्छ, पवित्र र निस्वार्थ भावनाले समप्र्रित भएर समाज सेवामा लाग्दा पनि धेरैको नजरबाट समेत सम्मानित हुन सकिन्छ भन्ने चलचित्रको भावबाट प्रभावित भएर समाजले सम्मान योग्य चलचित्र भन्दै निमात्री स्वयं म आफुलाई र निर्देशक सुरेन्द्र तुलाधरलाई सम्मान गरिएको हो ।
प्रश्न ः नारी संर्घष र साहसमा आधारित कथावस्तु भएका चलचित्रहरु त धेरै नै निर्माण भइसकेका छन । चलचित्र “मिस नेपाल” नै सम्मानित हुनुको संयोग के रहेछ बताइदिनुस न ?
उत्तर ः चलचित्रमा खास विषयवस्तुहरु भनेको अन्य चलचित्रहरुमा भन्दा अलि फरक किसिमको रहेको छ । यस चलचित्रमा नारी पात्रले समाजका समान्ती, ठूला÷ठालु सँग बदला लिने उद्देश्य सहित मारधाड, चुनौती दिने जस्ता पुराना ठर्राका विषयहरु समावेश गरिएको छैन । यसमा संघर्षशिल नारीको संवेदना, उसको समर्पण र अन्ततः सफलताका पात्र बन्न सकेकी नारी पात्रको कथा रहेको छ । हाम्रो समाजमा महिलाहरु अनेकन तिकडमबाजी गर्दै हावी हुँदै आइरहेको छन । यसमा स्वच्छ र निस्वार्थ भावनाबाट प्रेरित भई समाज सेवामा लागेका नारीहरु पनि सम्मानित हुन सक्छिन भन्ने सकारात्मक सन्देश दिन खोजिएको छ । यो सम्मान चलचित्र “मिस नेपाल”लाई मात्र नभएर सम्पुर्ण संघर्षशिल र समाज प्रति पवित्र भावनाले समप्रित नेपाली नारीहरुको पनि सम्मान हो भन्ने ठानेकी छु ।
प्रश्न ः चलचित्रको प्रर्दशन रोक्न त “हिडन ट्रेजर” नामक संस्थाले त खुृबै दुःख दिइएको कुरा पनि सुन्नमा आएको थियो नी ?
उत्तर ः हो । चलचित्र“मिस नेपाल”को प्रर्दशन रोक्न साम, दाम सबै प्रोपोगाण्डा अपनाएका थिए । यसको पहिलो कारण त म एउटा नारी भएकै कारण पुर्वाग्रहका साथ गरिएको त्यो षढयन्त्र थियो । अर्को कुरा, “मिस नेपाल” भन्ने शब्द नै हिडन ट्रेजर को ब्य्राण्ड हो रे । त्यो शब्द अरुले प्रयोग गर्नै पाउँदैन रे । तेस्रो कुरा सम्मानित रुपमा हुने गरेको सुन्दरी प्रतियोगितामा हुन सक्ने संभावित शोषणका संभावनाका दृष्यहरु र गतिछाडा र बकुम्फुसे युवतीहरु समेत प्रतियोगितामा सामेल हुँदै जानथालेको परिपाटीलाई पनि चलचित्रमा समेटिएको छ । यी कारणहरुले नेपालमा हुने गरेको सुन्दरी प्रतियोगिताका आधिकारिक आयोजक संस्था हिडन ट्रेजरले अनेक तिकडम बाजी गरेर चलचित्रको प्रर्दशन रोक्ने सम्मको दुष्प्रयासहरु समेत ग¥यो । म आफु महिला भएकै कारणले यत्ति सम्मको दुःख दिने काम गरेको हो भन्ने मेरो निष्कर्ष हो ।
प्रश्न ः तपाईले त चलचित्रको प्रोमोशनको लागि बढी नै ग्यामर्लस रुपमा प्रस्तुत पनि हुनु भयो । त्यसको प्रभाव त राम्रै भयो होला नी ?
उत्तर ः वास्तवमा मैले त्यो फोटो प्रकाशित आवेगमा आएर गरेकी थिए । सार्वजनिक गरिएको मेरो त्यो तस्विरको सन्र्दभमा मेरा फ्यान तथा शुृभचिन्तकहरुले आपत्ति जनाए । मैले पनि मैले गलत गरेछु भन्ने लागेर “आइ एम सरी” भनीसकेको छु । मेरो पनि केहि गुनाशाहरु रहेको भएता पनि समग्रमा त्यो तस्विरको सार्वजनिक गर्नाले गुनासाहरु नै बढी सुन्नु प¥यो ।
प्रश्न ः चलचित्रको सफलताको संभावनाहरु कस्तो देखिरहनु भएको छ त ?
उत्तर ः चलचित्रको विषयवस्तु सान्र्दभिक छन । नारीको सफलताका कथा बोकेको चलचित्र हो । अहिले सम्म राम्रो प्रतिक्रियाहरु पनि पाएको छु । चलचित्रको सफलता र असफलता त पुर्ण रुपमा दर्शको कुरा हो । चलचित्र राम्रो बनेको छ । सबै नेपाली दाजु भाइ दिदी बहिनीहरुमा चलचित्र एक पटक हेरिदिनु हुन अनुरोध समेत गर्दछु । मैले चलचित्र सफल रहने छ भन्ने आशा लिएको छु ।
हट केक नायिका सुरबिनाको हट च्याट्
रेखाले जीवनलाई चोखो प्रेम कहानी नभुल्नु भन्दै (भिडियो सहित )